Falanqaynta Klarna 2021 | Sharci mise khiyaamo? - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn Reviews Klarna 2021 | Sharci mise khiyaamo?
Isha sawirka: klarna.com
Waxaa jira iibsasho kala duwan oo la heli karo hadda, bixi ganacsiyada dambe sidoo kale loo yaqaan BNPL, iyo marar badan waxaan u aragnaa inay yihiin heshiisyo hadh ah maxaa yeelay maxaa bixiya.?
Heshiiskani wuxuu u muuqdaa mid aad u wanaagsan inuu run noqdo, waxayna si gaar ah noo bareen in heshiis kasta oo aad ugu dhaw inuu run noqdo uu yahay khiyaano.
Klarna waa tusaale ka mid ah shirkado badan oo BNPL ah oo halkaas ka helaya caan ah oo aad u badan.
Klarna waxa ay caan ku tahay in ay ku faanto wax kala iibsigooda bilaa ribada ah tusaale ahaan, in ay ku dalacaan wax dulsaar ah lacagta la soo amaahday iyo mushaharkooda 4 ikhtiyaar oo wax iibsiga ah taas oo kuu ogolaanaysa in aad ku faafiso kharashka wax kasta oo la soo iibsado 4 qaybood oo kala duwan taas oo kuu ogolaanaysa inaad bixiso qaybta koowaad Markaad dalbato alaabta markaas lacagta soo hartay waxay timaadaa labadii toddobaadba mar.
Shirkadani ma khiyaamo mise ganacsi xalaal ah? Shirkadani miyay dhab ahaantii shaqaalaysiisaa xeerka aan dulsaarka lahayn? Mise dhab ahaantii waa yeey gashan dharka idaha, oo ay ka buuxaan lacago qarsoon.
Maqaalkani waxa uu u noqon doonaa buug hage wax kasta oo lagu ogaanayo Klarna ka hor inta aanad go'aansan is-diiwaangelinta.
Waa maxay Klarna?
Klarna waa mid ka mid ah shirkadaha tignoolajiyada maaliyadeed ee ugu weyn Yurub. Waxaa la aasaasay 2005 magaalada Stockholm, Sweden oo uu aasaasay maamulaha hadda ee Sebastian Semiatkowski oo ay weheliyaan Niklas Adalberth iyo Victor Jacobsson.
Klarna oo sidoo kale loo yaqaanno sofort waa adeeg lacag-bixineed oo bangi oo online ah oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay sameeyaan macaamil ganacsi e-bangi oo badbaado leh, oo degdeg ah.
Sidoo kale, Klarna waxay diyaar u tahay dadka akoonnada bangiga ku leh Maraykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Jarmalka, Denmark, Finland, Sweden, Netherlands, Austria, iyo Norway. Klarna waa adeeg maalgelineed oo hadda la soo gato.
Klarna mobaylka app wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay naqshadeeyaan qorshooyinka lacag bixinta dukaamo gaar ah oo aan caadiyan u oggolaan hababka lacag bixinta.
Waxay u ogolaataa macaamiisha inay wax ka iibsadaan tafaariiqda sare sida Apple, Microsoft, Macy's, Sephora, Saks fifth avenue, iyo kuwo kale oo badan iyaga oo aan bixin wadarta lacagta hore, tani waxay ka caawisaa macaamiisha inay kala qaybiyaan qiimaha alaabta qaaliga ah oo ay bixiyaan qayb qayb.
Klarna waxa ay soo jiidataa macaamiil aad u tiro badan taas oo ay ugu wacan tahay halka ay ku xoogan tahay ee ah in ay bixiso eber dulsaarka lacagta la amaahday iyo dabacsanaanta bixinta alaabta qaaliga ah.
Sidoo kale, Klarna app waxaa loo isticmaali karaa labadaba wax iibsiga onlaynka ah iyo wax iibsiga. Klarna oo aan dulsaar lahayn ayaa ah beddel ku habboon kaararka deynta.
Sidee Klarna U Shaqaysaa?
Adigoo isticmaalaya Klarna, waxaad wax ku iibsan kartaa app-ka Klarna, online-ka iyo dukaamada u aqbala qaab lacag-bixineed ahaan.
Weydiinta Klarna soft credit, taariikhda gadashadaada, iyo tafaasiishaada shakhsi ahaaneed ayaa loo isticmaalaa si loo go'aamiyo xadka kharashkaaga shakhsi ahaaneed iyo u qalmida wax iibsiga.
Markaad wax ka iibsato Klarna, waxaad haysataa fursad aad ku doorato saddex ikhtiyaar oo maalgelineed oo kala duwan.
KU BIXI 4:
Doorashadani waxay kuu ogolaanaysaa inaad isticmaasho debit ama kaarka deynta si aad u bixiso iibsashadaada. Lacag bixinta ugu horreysa (25% wadarta cadadka) waxaa lagu dalaci kaadhkaaga ka dib markii wakiilku uu habeeyo dalabkaaga.
Saddexda lacag bixin ee soo socota ayaa si toos ah loogu dalaci doonaa kaarka deynta labadii toddobaadba mar iyadoo 2-maalmood ka hor ah xusuusin.
Mushaharka 4 ikhtiyaar ee maalgelineed ayaa leh eber boqolkiiba dulsaarka ilaa inta aad raacdo jadwalka lacag bixinta tooska ah.
KU BIXIN 3O MAALMOOD:
Doorashadan maalgelinta waxay u ogolaanaysaa macmiilku inuu ka iibsado alaabta la rabo tafaariiqlayaasha taageera maaliyadda Klarna.
Marka uu tafaariiqle kuu soo diro dalabkaaga, waxaad Klarna ka helaysaa qaansheegta dhijitaalka ah oo caddaynaysa in bixinta alaabtu ay tahay 30 maalmood gudahood.
Mushaarka 30 maalmood gudahooda wuxuu u sahlayaa macaamiisha inay dib u soo celiyaan alaabada ay iibsadeen oo aysan jeclayn oo ay ku bixiyaan baaqiga ugu dambeeya ee kaarka deynta, kaarka deynta ama akoon bangi.
Mushaharka 30-ka maalmood ee doorashada ku jira waa eber lacag dulsaar ah ama khidmad qarsoon haddii aad ku bixiso qaansheegta wakhtiga loo cayimay.
Qorshaha 6-36 bilood:
Wax badan ayaa sidoo kale loo yaqaan qorshahan inuu yahay maalgelin ama "jeex". Doorashadan inta badan waxaa loogu talagalay alaabooyinka qaaliga ah, ikhtiyaarkuna wuxuu u furan yahay tiro isticmaaleyaal ah oo keliya.
Waxay u shaqeysaa sida kaarka deynta oo kaliya farqiga u yahay maqnaanshaha kaarka jirka. Waxay ku faafin karaan wax iibsigaaga muddo 6 ilaa 36 bilood ah, laakiin heerka boqolkiiba sannadlaha ah ayaa ka weynaan doona kaarka deynta.
Kaarka deynta looma oggola lacag bixinta qorshahan, markaa waxaad u baahan doontaa inaad isticmaasho kaarka bangiga ama xisaab bangi.
Qorshaha 6-36-bilood ama maalgelinta Klarna waxay ku imaan kartaa saddex nooc oo kala duwan iyadoo ku xiran nooca uu baayacmushtarku bixiyo. Waxaa ka mid ah,
Lacagaha la qorsheeyay:
Doorashada lacag-bixinta ee qorshaysan waxaad heli doontaa jadwal lacag-bixineed oo cayiman oo ay weheliso dulsaarka iyo heerka boqolleyda sannadlaha ah.
Waxaa loogu talagalay inaad bixiso lacagta go'an bil kasta.
BIL ILAA BISHA DABACSAN:
Doorashadani waxay kuu ogolaanaysaa inaad adigu shakhsi ahaan naqshadayso qorshahaaga lacag bixinta halka baayacmushtarku ku siinayo dulsaar tayo leh iyo lacag bixinta ugu yar ee lagu ogol yahay credit ama kaarka deynta.
Waxaa lagugula talinayaa inaad si degdeg ah u bixiso baaqigaaga si aadan u ururin ribada.
DHAGEYSO MAALIYADDA DANBE:
Doorashadani waxay sidoo kale u baahan tahay lacag-bixinta ugu yar sida bisha jilicsan. Qorshaha maalgelinta ribada ee dib loo dhigay ayaa macaamiisheeda u ogolaanaya in ay iska bixiyaan wax iibsiga iyada oo aan wax ribo ah laga qaadin.
Waxay kugu soo dalacayaan ribo muddada dib-u-celinta oo dhan haddii aad ku bixin weydo muddada ay kuu qoondeeyeen.
Kahor intaadan wax ka iibsan dukaanka tafaariiqda ee aqbala adeegyada Klarna, waxaa lagu talinayaa in si taxadar leh loo maro shuruudaha iyo shuruudaha uu bixiyo tafaariiqda ka hor inta aanad dooran qorshaha maalgelinta.
Waa maxay faa'iidooyinka iyo khasaaraha isticmaalka Klarna?
Ma ku fakaraysaa inaad iska diiwaangeliso Klarna ama wax la xidhiidha iibso hadda bixi shirkadaha dambe?
Hoos waxaa ku qoran liiska faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka si ay kuugu suurtagasho inaad gaarto go'aanka ugu fiican.
Waxay bixisaa siyaabo badan oo lagu maalgeliyo wax iibsiga.
Klarna waxaa loo isticmaali karaa labadaba online iyo dukaanka wax iibsiga.
Waxay bixisaa qorshayaal dulsaar bilaash ah oo kala duwan
Uma baahna xubinimo ama kharash sanadle ah.
Klarna waxay soo bandhigtaa xulashooyin badan oo lacag bixin ah oo diyaar ah.
Klarna waxaa loo isticmaali karaa shirkad kasta oo tafaariiqeed oo ku taal Maraykanka oo aqbasha kaararka deynta ama kaararka deynta.
Waxay siisaa fursad sahlan, la isku halayn karo oo badbaado leh oo laga iibsan karo dukaamo kala duwan.
Waxay u abuurtaa nambar kaarka farsamada ee dukaamada kale.
Dhibcaha waxaad ku heli kartaa isdiiwaan gelinta barnaamijkeeda abaal-marineed ee loo yaqaan vibe, waxay kuu ogolaanaysaa inaad kaash ka bixiso dhibcaha la ururiyay sida kaadhadhka hadyada.
Klarna waxay u baahan tahay jeegag deymo jilicsan, tusaale ahaan, weydiinta taariikhda deyntaada shakhsi ahaaneed ama warbixintaada.
Waxaa lagugu dallici karaa dib u dhaca qorshahaaga lacag bixinta ee lagu heshiiyay.
Lacag-bixinta seegtay waxa lagu wargelin karaa xafiiska daynta taasoo yarayn karta qiimaynta deynta.
Adeegga macaamiisha oo si liidata loo maareeyay.
Kharashyada soo daaha ayaa urursan kara.
Waxay kordhisaa fursadaha aad ku dhici karto deynta sababtoo ah had iyo jeer amaahda.
Lacag-celinta waxay noqon kartaa mid adag maadaama Klarna ay isticmaasho siyaasado soo celin iyo lacag celin kala duwan kuwaas oo ku xiran dukaanka laga soo gadanayo.
Ma aqbalayo kaarka hore loo bixiyo.
Waa maxay tillaabooyinka lagu dejinayo Klarna App kaaga?
Haddii aad joogto hal waddan oo aad aqbasho Klarna qaybtani waxay u adeegi doontaa hage ku wajahan samaynta akoonkaaga Klarna.
App-ka Klarna waa fududahay in la isticmaalo, tillaabooyinka ku lug leh dejinta waxaa ka mid ah:
1. Soo dejiso KLARNA APP:
App-ka Klarna waxa uu hadda diyaar u yahay macaamiisha android iyo tufaaxa labadaba, waxa lagala soo bixi karaa Google playstore iyo Apple Appstore siday u kala horreeyaan.
Waxay kaaga baahan doonaan inaad abuurto profile bixinaysa tafaasiisha shakhsiyeed sida magaca, ciwaanka iimaylka, iyo lambarka taleefanka
2. Ku xidhidhi kaadhka deynta ama kaadhka deynta:
Kaarka deynta ama macluumaadka kaadhka deynta waa in lagu daraa qaybta profile kaaga ee abka wixii iibsi ah ee la sameeyo.
3. Bilaw wax iibsiga:
Waxaad diyaar u tahay inaad si xor ah uga soo iibsato dukaamada tafaariiqda ee kala duwan adigoo isticmaalaya app-ka.
Ka dib wax soo iibsashada oo aad diyaar u tahay inaad u gudubto qaybta jeeg-bixinta waxaa lagaaga baahan doonaa inaad isticmaasho kaarka hal-mar ah ee loo yaqaan Klarna ghost card.
Ikhtiyaarada lacag-bixinta ayaa laguu samayn doonaa iyadoo ku xidhan qadarka iibka.
Iib kasta oo lagu sameeyo abka Klarna waxa uu u baahan doonaa ogolaanshaha abka ka hor inta aanad u qalmin koontada maalgelinta Klarna oo awood kuu siinaysa in aad si gaar ah u gasho.
Iibsashada shay badan gudaha waqti gaaban waxay horseedi kartaa diidmo codsi. Iibsi kasta oo Klarna ah wuxuu maraa habka oggolaanshaha. Klarna waxaa loo ogol yahay inay dib u eegto taariikhdaada deyn iibsi kasta oo aad sameyso.
Haddii aad hubinayso inaad doorato qorshaha lacag bixinta ee qayb qayb, Klarna waxay mari doontaa jeeg deymo jilicsan oo joogto ah kaas oo aan saameynaynin dhibcahaaga deynta laakiin haddii aad dooratid qorshaha maalgelinta Klarna, waxay maraan jeeg credit adag kaas oo awood u leh inuu yareeyo kaaga. dhibcaha credit by dhowr dhibcood.
Ma jiro buundada buundada ugu yar ee loo baahan yahay macmiilku si uu ugu qalmo Klarna.
App-ka moobilka ee Klarna wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la socoto alaabtaada, aad aragto taariikhda iibka, iyo habka soo celinta. Codsigu wuxuu sidoo kale u ogolaanayaa macaamiisha inay ku abuuraan shay liiska rabitaanka mustaqbalka iibsashada ama la wadaagaan kuwa kale fikradaha hadiyadaha.
App-ka waxa uu leeyahay sifo kuu soo diraysa ogeysiin marka ay jirto qiimo dhimis shay kasta oo la geliyo qaybta liiska rabitaannada.
Klarna waa mid ka mid ah kuwa yar ee hadda iibsada barnaamijyada dambe ee bixiya barnaamijka daacadnimada Ie, Vibe kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku kasbato dhibco iibsi kasta oo la sameeyo, dhibicdan waxaa loo rogi karaa kaararka hadiyadda ee Starbucks, Sephora iyo kuwa kale.
Barnaamijka vibe waxaa loogu talagalay in lagu abaalmariyo macaamiisha oo lagu sii hayo.
Klarna ma sharci baa mise waa khiyaamo?
MAYA, Klarna maaha khiyaamo. Cilmi baaris adag ka dib, waxaan si badbaado leh u dhihi karnaa Klarna inkasta oo ay bixiso adeeg laga yaabo in uu aad u wanaagsan yahay in uu run noqdo maahan khiyaano.
Klarna waxay siisaa wax iibsi cajiib ah hadda u bixi adeeg dambe oo ay siiso macaamiisheeda iyada oo boqolkiiba eber dulsaarka ahi tahay inta aad ilaalinayso heshiiskii hore adoo bixinaya wakhtiga loo cayimay.
Klarna waxa ansixiyay Xafiiska Better Business Bureau (BBB) ​​ilaa 2015 oo leh qiimayn A+ ah.
App-ka Klarna waxa uu Google Play Store ku leeyahay 4.6-star rating iyo 4.9-star dukaanka Apple App-ka iyada oo dib u eegis online ah ay ka heleen macaamiisha iyo shaqaaluhuba ay caddaynayaan in Klarna ay tahay shirkad sharci ah oo aanay ahayn fadeexad. Klarna waxay ka soocaa BNPL'S kale sababtoo ah dulsaar eber ah oo gaar ah, dabacsanaan, iyo badbaado iyo badbaado.
Waxa Klarna ay dhab ahaantii ka amaahato macaamiisheeda lacag si ay ugu suurtagasho inay iibsadaan oo ay doortaan ikhtiyaarka ay door bidaan ee dib u bixinta deynta, haddii ay xawilaan qaddarka taariikhda la isku raacay ee lagu heshiiyey wax lacag ah lagama saarayo lacagta la amaahday.
Kharashka dulsaarka waxa uu yimaadaa kaliya marka macaamiishu uu dib uga dhaco dib u bixinta cadadka lagu heshiiyey.
Xaaladda marka aad dib u dhigto lacag bixintaada waxaad heli kartaa inaad bixiso khidmad ilaa 7$ iyo ilaa 35$ qorshayaasha mudada dheer. Kharashka Klarna ee soo daahay kama badnaan karo 25% wadarta lacagtaada iibka.
Ka sokow tan aqbalaadda Klarna ee ganacsiyada waaweyn qaarkood sida Sephora, Macy, Starbucks, iyo kuwa kale waa inay u adeegaan arrin caddaynaysa inay yihiin ganacsi sharci ah oo aan ahayn khiyaamo.
Klarna ma tahay shirkad sharci ah?
Haa, Klarna waa shirkad sharci ah oo leh qiimeyn A+ ah oo ku saabsan xafiiska ugu wanaagsan ee ganacsiga.
Klarna ma leedahay kharashyo dulsaar qarsoon?
Maya, haddii aad ilaaliso wakhtigaaga lacag bixinta ah laguma dalaci doono wax kharash ah oo dheeraad ah.
Klarna ma leedahay xaddid kharash-bixineed?
Haa, Klarna waxa ay leedahay xaddid kharash-bixineed kaas oo kordhiya inta badan ee aad wax ka iibsanayso Klarna oo aad si joogto ah u bixiso deyntaada waqtigii loogu talagalay.
Klarna ma ku ogeysiiyaa marka lacag bixinta la bixinayo?
Klarna waxay kuu soo diri ogeysiin laba maalmood ka hor taariikhda kama dambaysta ah si ay kuu xasuusiso lacag bixintaada.
Horaad ma uga bixin karaa Klarna?
Haa, kaliya gal abkaaga oo dooro wakhti hore lacag bixi
Ma jiraan wax beddel ah oo Klarna ah?
Shirkadaha sida Afterpay, Afirm, Perpay, Sezzle, iyo Splitit waxay bixiyaan adeegyo la mid ah.
Klarna waxay bixisaa iibsi ku habboon hadda, bixi adeegga dambe ee iibsashada macaamiisha. Klarna waxay u ogolaataa macaamiisheeda inay helaan waxay rabaan oo ay bixiyaan muddo wakhti ah.
Inkasta oo ay soo bandhigto heshiisyo aad u wanaagsan oo run ah, shirkaddu waa ganacsi sharci ah oo aan wax dulsaar ah ku soo dalaceynin lacagta la soo amaahday oo leh khidmadaha soo baxaya kaliya marka aadan dib u bixin qaddarka lagu heshiiyey wakhtiga la cayimay.
Sida Loo Helo Wiil Saxiib Ah Oo Dhabta Ku Jecel
Sidaan ugu wareejiyay Sweatcoin My PayPal 2021
Dib -u -eegista CarShield 2021: Sidee bay u Shaqaysaa | Xalaal Mise Fadeexad?
Dad badan ayaa jecel baabuurta farxadda leh. Inta ay jecel yihiin, waxay u baahan yihiin inay helaan…
Marna ma qiyaasi karno soo dejinta dib u eegista marka la iska diiwaan geliyo badeecad cusub. Waxay kaliya badbaadinaysaa kaaga…
Dunida ganacsiga dhijitaalka ah, waxyaabo yar ayaa ka muhiimsan ilaalinta alaabadaada. Alaabada…